DEG DEG:- Qarax aad u xoogan oo goordhaw Muqdisho ka dhacay iyo qasaare ka dhashay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Qarax aad u xoogan oo goordhaw Muqdisho ka dhacay iyo qasaare ka dhashay
Qarax aad u xoogan ayaa goordhaw ka dhacay isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho, kaas oo ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Qaraxaasi ayaa sida la sheegay dhacay kadib markii ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda ay eryadeen gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa oo ay wateen laba qof oo ku hubeysnaa qoryaha AK-47, wuxuuna gaarigaasi qarxay xilli uu maraayay isgoyska Siinaay ee magaalada Muqdisho.
Ilaa iyo haatan lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qaraxaasi, balse goob-joogayaal ayaa sheegay inuu jiro dhaawac farabadan oo soo gaaray dad shacab ah, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiijin karin.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in labadii qof ee watay gaariga ay ka dageen kahor inta uusan qarxin balse ma jirto wax war ah oo kasoo baxay dowlada federaalka Soomaaliya oo xaqiijinaya warkaas.
Waxaa goobta uu qaraxa ka dhacay islamarkiiba soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka iyo gawaarida gurmadka deg dega ah, waxaana haatan aad u adag in la ogaado qasaaraha dhabta ah uu qaraxaasi geystay.
Ma jirto cid sheegatay mas’uuliyadda qaraxaasi, iyadoona mudooyinkii ugu dambeysay ay ciidanka nabad-sugidda qaranka fashiliyeen qaraxyo lala damacsanaa in lagu weeraro xarumaha dowladda iyo goobaha ay bulshada isugu timaado ee magaalada Muqdisho.